Ny teny hoe vlog dia matetika manondro karazana bilaogy mifantoka amin'ny horonan-tsary. Ny marimarina kokoa dia bilaogy izay ahitana ny lahatsoratra sy lahatsoratra mahazatra navoakan'ny mpampiasa maka endrika lahatsary. Mampiasa ny teny hoe videoblog ihany koa izahay hamaritana ity karazana bilaogy ity.
fakan-tsary ho an'ny vlogging
Avy amin'ny bilaogy, ny vlog dia maka ny toetra fototry ny teo alohany. Izy io dia aseho ho karazana diary virtoaly izay ahafahan'ny bilaogera manao ny fiainany manokana, ny fitiavany, mizara ny tiany na ny toerana misy azy, sns. Raha toa ka mijanona ho fitaovana ampiasaina hanaparitahana ity votoaty ity ny horonan-tsary, dia mbola mahazo alalana ny fanampiana famaritana fohy, na lahatsoratra fanampiny.
Tsy vaovao ny hevitra momba ny vlogging. Nanomboka tamin'ny taona 80 izany, rehefa nandrakitra vlogs tao an-tanànany i Nelson Sullivan, mpanakanto iray avy any New York, izay mikasa ny hanao izany ho azy manokana amin'ny fahitalavitra.
Miaraka amin'ny fahatongavan'ny Internet, dia nanomboka nandefa horonan-tsarimihetsika an-tserasera ny olona hafa, izay nizarany ny traikefany na ny fahazarany isan'andro. Taorian'ny fampidirana ny Youtube tamin'ny taona 2005, nitsambikina haingana ny vlogging ary lasa iray amin'ireo endrika famoronana votoaty tadiavina indrindra.
Ny fiantraikan'ny smartphone amin'ny vlogging[hanova | hanova ny fango]
Fisehoan'ny finday avo lenta
Misy fiantraikany amin'ny vlogging ihany koa ny fivoaran'ny teknolojia tsy tapaka. Ohatra, fitaovana azo entina - izany matetika no tadiavin'ny vloggers.
Ny finday dia tena azo entina, ary noho ny fandrosoana haingana amin'ny teknolojia fakantsary finday, ny vlogger dia afaka mamita mora foana ny asany tsy mila mampiasa fitaovana mavesatra sy lafo.
Ankehitriny isika dia afaka mirakitra horonan-tsary hatramin'ny 8K amin'ny fitaovana finday. Ny ankamaroan'ny maodely koa dia tonga miaraka amin'ny endri-javatra toy ny fanamafisana ny sary optika, ny hetsika miadana, ary ny autofocus, izay mahatonga ny horonan-tsary mendrika amin'ny famokarana.
Mora entina ihany koa ny finday noho ny fakan-tsary; Tazony amin'ny halavan'ny sandriny fotsiny izy ireo ary manomboka mirakitra. Be dia be ny kojakoja, toy ny selfie sticks sy pop sockets, izay mahatonga ny firaketana vlog ho mora.
Ilaina ny fanitsiana ny vlog-nao. Ary, satria misy fampiharana ho an'ny zava-drehetra, ny fanitsiana dia azo atao mora foana amin'ny alàlan'ny fampiharana fanovana video amin'ny finday.
Misy endrika isan-karazany mamela anao handefa horonantsary amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny vlog. Misy fomba fandefasana roa azon'ny vloggers: fandefasana horonan-tsary (amin'ny alàlan'ny streaming na streaming) na fanaterana ara-potoana fototra (amin'ny alàlan'ny podcasting).
Ny Podcasting dia anisan'ny mahatonga ny fanamafisan'ny vlogs. Ny endrika RSS sy ny vohikala ary ny rindrambaiko hitrandraka azy (ary koa ny fitomboan'ny hafainganam-pandehan'ny Internet) dia mampitombo tsikelikely ny isan'ny vlogs amin'ny Internet.
Ny vlog dia azo alefa isan'andro, matetika na tsy ara-dalàna.
Fanamarihana sy references[hanova | hanova ny fango]
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Vlog&oldid=1044253"
Voaova farany tamin'ny 6 Martsa 2022 amin'ny 14:24 ity pejy ity.